Tag: fiovam-po video | Martech Zone
Tag: fiovam-po video
Alakamisy, Desambra 2, 2021 Alakamisy, Desambra 2, 2021 Juli Greenwood
Na dia nihidy aza izao tontolo izao tamin'ny 2020, ny traikefa nomerika feno sary sy horonan-tsary dia nahatonga anay hifandray. Niantehitra mafy kokoa noho ny teo aloha izahay tamin'ny fomba mahazatra kokoa amin'ny fifandraisana nomerika ary nandray fomba vaovao sy zava-baovao mba hizarana ny fiainantsika sy hifandraisana amin'ny halavirana azo antoka. Avy amin'ny Zoom ka hatramin'ny TikTok sy Snapchat, dia niantehitra tamin'ny endrika nomerika fifandraisana ho an'ny sekoly, ny asa, ny fialamboly, ny fiantsenana ary ny fifandraisana amin'ny olon-tiana fotsiny izahay. Tamin'ny farany, nanana dikany vaovao ny herin'ny votoaty hita maso. Na inona na inona
Tsy takona afenina fa mirongatra ny fampiasana horonantsary amin'ny marketing amin'ny atiny. Nandritra izay taona vitsy lasa izay, ny horonantsary an-tserasera dia voaporofo ho endrika atiny manintona indrindra sy mahasarika indrindra ho an'ireo mpampiasa. Nanjary iray amin'ireo sehatra mahomby indrindra amin'ny marketing amin'ny horonan-tsary ny media sosialy, ary zava-misy izany mba tsy hamaivanina. Izahay dia manana torohevitra tena ilaina ho anao momba ny famokarana horonantsary mahomby izay misarika ny saina